#GIS-IArcGIS Pro kunye ne-QGIS 3 ikhosi- kwimisebenzi efanayo
Funda nge-GIS usebenzisa zombini iinkqubo, kunye nemodeli yedatha efanayo Isilumkiso Ikhosi ye-QGIS yenziwa okokuqala eSpain, ngokulandela izifundo ezifanayo kunye nezifundo ezaziwayo zesiNgesi Funda iArcGIS Pro Easy! Sikwenzile ukubonisa ukuba konke oku kunokwenzeka ngokusetyenziswa kwesoftware evulekileyo; bahlala beSpanish Ke, abanye abasebenzisi be…
Izifundo ze-ArcGIS Izifundo ze-GIS Iikhosi ze-QGIS
#GIS-Iinkqubo zoLwazi lweJografi ezineQGIS
Funda ukusebenzisa i-QGIS ngokusebenzisa iiNkqubo zoLwazi lweJografi usebenzisa iQGIS. -Lonke uqeqesho onokuwenza eArcGIS Pro, lwenziwe ngesoftware yasimahla. -Import CAD data to GIS -Attribute-based calculated -Rule-based calculate -Layoutprints -Import inxibelelanisa i-Excel -Carrying scan -Georeference imifanekiso Zonke iifayile ...
Izifundo ze-GIS Iikhosi ze-QGIS
#GIS-Ikhosi ye-ArcGIS Pro ehamba phambili
Funda ukusebenzisa amanqaku aphambili eArcGIS Pro - GIS isoftware ethatha indawo yeArcGIS Pro Le khosi ibandakanya, imiba ephambili yeArcGIS Pro: Ulawulo lweSatellite yemifanekiso (iMifanekiso), iiNdawo zeDatha (Geodatabse), Ulawulo lwamafu lweLiDAR Point, ukuPapashwa komxholo neArcGIS kwi-Intanethi, iZicelo ze…
Izifundo ze-ArcGIS Izifundo ze-GIS
#GIS-Ikhosi yeArcGIS 10 - ukusuka ekuqaleni
Uyayithanda i-GIS, ke apha unokufunda i-ArcGIS 10 ukusuka ekuqaleni kwaye ufumane isatifikethi. Le khosi yi-100% elungiselelwe ngumyili we- "El blog de franz", ukuba ukhe wayindwendwela elo phepha uyokwazi ukuba ukuba uza kufunda, kwenze ngaphambi kokuqala. Kubandakanya ukuzivocavoca kunye nencwadi: zokuqala ze-GIS. Ewe ...
I-#GIS - Ikhosi ye-Geolocation ye-Android - usebenzisa html5 kunye neMephu zikaGoogle
Funda ukuba ungayisebenzisa njani imephu zika google kwizicelo zakho zeselfowuni ngefowuni kunye neGoogle google Java Java Kwesi sifundo uya kufumanisa ukuba ungasenza njani isoftware ngeMephu zikaGoogle kunye nefowgap ilungele abaqalayo. Ngaba uyafuna ukufunda indlela yokuphuhlisa usetyenziso lwesoftwe kunye nokongeza iimephu ezivela kwiimephu zeGoogle API? Imephu zikaGoogle yiseva yesicelo se…
Yiba yingcali yokwenyani yeGoogle Earth Pro kwaye uthathe ithuba lokuba le nkqubo isimahla. Umntu ngamnye, iingcali, ootitshala, izifundiswa, abafundi, njl. Wonke umntu unokusebenzisa le software kwaye ayisebenzise kwicandelo lakhe elihambelanayo. ---------------------------------------------------- ------------------------------------------ Google Earth sisoftware ekuvumela ukuba ubone imbonakalo Isatellite, kodwa 'ngokusebenzisa umbono wesitrato', umhlaba wethu. Ngoku ...
#GIS -Imodeli kunye nezifundo zohlalutyo lwezikhukula- zisebenzisa i-HEC-RAS kunye neArcGIS
Fumanisa amandla e-Hec-RAS kunye ne-Hec-GeoRAS yokwenza imodeli yesitayile kunye nohlalutyo lomjelo #hecras Le khosi esebenzayo iyaqala ukusuka ekuqaleni kwaye yenzelwe inyathelo ngenyathelo, ngokwenza imisebenzi efanelekileyo, ekuvumela ukuba wazi iziseko eziphambili kulawulo lwe-Hec -RA. Nge-Hec-RAS uya kuba nakho ukuqhuba izifundo ngezikhukhula kwaye umisele ...
Izifundo ze-ArcGIS Izifundo zeSensor ekude Izifundo ze-GIS
I-#GIS-Ikhosi yokuHanjiswa kweZikhukula-i-HEC-RAS ukusuka ekuqaleni
Uhlalutyo lwezikhukula kunye nezikhukula ngesoftware yasimahla: I-HEC-RAS HEC-RAS yinkqubo ye-United States Army Corps yeenjineli, ukulungiselela imodeli yezikhukula kwimilambo yendalo kunye neminye imijelo. Kule khosi yokwazisa uza kubona inkqubo yokufezekiswa kwemodeli yomntu omnye, nangona ivela kwinguqulelo ye5 ...
#GIS-QGIS 3 ikhosi inyathelo ngenyathelo ukusuka ekuqaleni
Ikhosi ye-QGIS 3, siqala nge-zero, siya ngokuthe ngqo kwinqanaba de sifike kwinqanaba eliphakathi, ekugqibeleni kunikezelwa isatifikethi. Iinkqubo zoLwazi lweJografi QGIS, sisifundo esenziwe phantse ngendlela esebenzayo. Ikwadibanisa ubuncinci benqaku lethiyori evumela abafundi ukuba baseke ulwazi lwabo kwi-GIS, ...
#LANDELWEYO INkundla yokuZazisa eyiRekhoda
Fumanisa amandla okuziva kude. Amava, yiva, hlalutya kwaye ubone yonke into onokuyenza ngaphandle kokubakho. I-Remens Sensing (RS) iqulethe iseti yeendlela ekubanjweni ezikude kunye nohlalutyo lolwazi olusivumela ukuba sazi intsimi ngaphandle kokubakho. Ubuninzi benkcukacha zokujonga ...
#GIS - Ikhosi ye-ArcGIS Pro - ukusuka ekuqaleni
Funda i-ArcGIS Pro Easy - yinkqubo eyenzelwe abantu abanomdla kwiinkqubo zenkcazelo yoluntu, abafuna ukufunda indlela yokusebenzisa le software ye-Esri, okanye abasebenzisi beenguqulelo zangaphambili abalindele ukuhlaziya ulwazi lwabo ngendlela efanelekileyo. I-ArcGIS Pro yinguqulo entsha ye-software ye-GIS ethandwa kakhulu, ezo ...
ArcGIS-ESRI, cadastre, Izifundo ze-AulaGEO, Ukufundisa i-CAD / GIS